Xoghayihii hore ee arrimaha dibedda Mareykanka Colin Powell wuxuu u dhintey COVID-19 isagoo 84 jir ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dadka » Xoghayihii hore ee arrimaha dibedda Mareykanka Colin Powell wuxuu u dhintey COVID-19 isagoo 84 jir ah
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Xoghayihii hore ee arrimaha dibedda Mareykanka Colin Powell wuxuu u dhintey COVID-19 isagoo 84 jir ah.
Powell wuxuu ka niyad jabay tallaabada uu xisbigiisu u qaaday dhanka midig oo xitaa wuxuu si cad u taageeray Barack Obama isku daygiisii ​​madaxweynenimada. Powell wuxuu kaloo taageeray murashaxnimada Joe Biden inuu hoggaamiyo dalka, isagoo caddeeyay inuu noqon doono “madaxweyne aan dhammaanteen ku faan doonno inaan salaanno.”
Afar-xiddigle hawlgab ah iyo xoghayihii hore ee arrimaha dibedda Mareykanka, Colin Powell, ayaa u dhintay dhibaatooyin ka dhashay COVID-19.
Colin Powell ayaa lagu daweynayay Xarunta Caafimaadka Qaranka ee Walter Reed.
Colin Powell waxaa laga helay myeloma badan.
Colin Powell, Republican -ka caanka ah, oo ahaa ninkii ugu horreeyay ee Afrikaan Mareykan ah oo u adeega Xoghayaha Arimaha Dibadda ee Mareykanka, ayaa ku dhimatay da'da 84 jir, sababo la xiriira dhibaatooyin ka dhashay COVID-19.
Rug-caddaa 35-jir ah oo ka tirsan Ciidanka Mareykanka, oo gaaray darajada afar-xiddigle jeneraal ka hor inta uusan siyaasadda gelin, ayaa lagu daweynayey Xarunta Caafimaadka Qaranka ee Walter Reed, markii uu geeriyooday, qoyskiisu waxay maanta ku shaaciyeen qoraal boggiisa Facebook.
"Waxaan luminay seyge cajiib ah oo jeclaa, aabbe, awoowe iyo nin weyn oo Mareykan ah," ayay yiraahdeen, iyagoo raaciyay in si buuxda looga tallaalay COVID-19, laakiin aakhirkii ay naftiisii ​​qaadatay.
Qoyska Powell ayaa u mahadceliyey shaqaalaha caafimaadka “daryeelka daryeelkooda”. Sababta dhimashada ayaa lagu sheegay inay tahay “dhibaatooyin ka yimid COVID-19.” Subaxnimadii hore ee Isniinta ayuu geeriyooday.
Jeneraal afar xiddigle ah oo hawlgab ah ayaa laga helay myeloma badan, sida ay warbaahintu sheegtay, nooc ka mid ah kansarka dhiigga oo hor istaagaya awoodda jirka ee la dagaallanka caabuqyada.
Colin Powell wuxuu soo noqday guddoomiyaha Taliyayaasha Wadajirka ah ee Shaqaalaha, oo ah jagada ugu sarreysa milateriga ee Waaxda Difaaca Mareykanka, xilligii Madaxweyne George HW Bush, wuxuuna ahaa qofka ugu da’da yar iyo qofkii ugu horreeyay ee Afrikaan Mareykan ah ee qabta jagadaas.
Powell ayaa xitaa loo maleeyay inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ee Mareykanka, ka dib markii shacbiyaddiisu ay sare u kacday ka dib ololihii uu Mareykanka hoggaaminayey ee ka dhanka ahaa duullaankii Saddam Hussein ee Kuwait 1990-kii.
Wuxuu markii dambe noqday George W. Bush kii ugu horreeyay Xoghayaha Dawladda iyo, mudadaas, wuxuu noqday sarkaalka ugu sarreeya ee madowga ah ee dadweynaha. Sannadkii 2003, Powell wuxuu sameeyay dacwaddii maamulkiisa ee ahayd inuu Ciraaq ku soo duulay Qaramada Midoobay, isagoo u daliishanaya sirdoon khaldan in nidaamkii Bacaad ee Xuseen uu kaydinayey hubka wax gumaada.
Sawirka hadda muuqda, wuxuu kor u taagay dhalada tusaalaha ah ee faux anthrax horteeda Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, laakiin wuxuu u imaan doonaa inuu u aqoonsado dhacdada inay tahay "baabba '" diiwaankiisa. Waxa ka dhashay dagaal sideed sano burburay.
Waxaa lagu qiyaasaa in ka badan hal milyan oo Ciraaqiyiin ah inay naftooda ku waayeen rabshadaha ama saboolnimada ka dhalatay duulaanka, kumannaan askari oo Mareykan ahina way dhinteen intii uu socday hawlgallada Mareykanka ee Ciraaq. Ka dib duulaankii wuxuu horseeday rabshado diimeed oo baahsan iyo kor u kaca Dawladda Islaamka (IS, oo hore u ahayd ISIS).
Powell wuxuu ka niyad jabay tallaabada uu xisbigiisu u qaaday dhanka midig oo xitaa si cad loo taageeray Barack Obama isaga oo u tartamaya jagada madaxweynenimo.
Powell wuxuu kaloo taageeray murashaxnimada Joe Biden inuu hoggaamiyo dalka, isagoo caddeeyay inuu noqon doono "madaxweyne aan dhammaanteen ku faan doonno inaan salaanno."
Powell wuxuu lahaa saddex carruur ah waxaana ka hadhay xaaskiisa, Alma, oo uu guursaday 1962 -kii.